Zimbabwe Election Ruled Fair By African Union : NPR
Zimbabwe Election Ruled Fair By African Union Zimbabwe's presidential election was a "huge farce," according to the opposition challenger. He alleges massive vote rigging by veteran President Robert Mugabe. But the African Union said that aside from a few incidents, the voting was free and fair.
Zimbabwe's presidential election was a "huge farce," according to the opposition challenger. He alleges massive vote rigging by veteran President Robert Mugabe. But the African Union said that aside from a few incidents, the voting was free and fair.